Home Hoyga Nolosha 7 cunto oo sabab u noqon kara wadne-xanuunka loo dhinto
Halista ay leeyihiin cuntooyiinka ay ku badan yihiinsokorta, dufanka iyo cusbada.
Cuntooyiinka halista ku ah wadnaha. PHOTO: Unsplash
Ma dooneysaa in wadnahaaga iyo halbowleyaasha ku xiran ay caafimaad ahaan wanaagsanaadaan? Haddaba cuntooyiinkaan ka fogow, yaysanna ka mid noqonin waxa aad maalin kasta cuneyso.
Cunistooda yaree – inta bandanna – ku bedel cuntooyiinka khudaarta u badan ee caafimaadka laga helo.
Cuntooyiinka fudud sida baagarka
Ha ahaadaan kuwa dufin badan leh oo lala xiriiriyo xan8uunada wadnaha ama wax kale, iska ilaali. Seynisyahannada weli waxay baarayaan saameynta dhabta ah ee ka dhalata cuntooyiinka noocan ah, balse waxay ku talinayaan in la iska ilaaliyo.
Sida ay sheegtay Dhakhtar Regina Durz, oo ka tirsan Jaamacadda Hofstra, hilibka lo’da lasoo siiyay cowska badan, in laga heli karo xoogaa caafimaad wadnaha ah, balse marka waxyaabo kale oo kiimiko ah lagu koriyo in ay halis noqon karaan.
Haddaba, in aad ka fogaato cuntooyiinkan fudud eel aga kariyay hilibka iyo khudaarta aan tayada wanaagsan lahayn, waxay kuu tahay fursad caafimaad oo wayn.
Hilibka warshadeysan ama macmalka ah
Hilibka warshadeysan ama macmalka ah waxaa ku badnaan kara dufinka caafimaad darrada ah. Kuwa aan dufanka lahaynna waxaa ku badan cusbo aad xad-dhaaf u ah.
“Dadka badankooda waa in ay iska ilaaliyaan cuntooyiinka cusbada laga badiyay, sababtoo ah waxaa sodium lala xiriiriyaa dhiigkarka,” ayay tiri Dr. Mehta, oo Agaasime ka ah Qeybta caafimaadka Wadnaha Dumarka ee Jaamacadda Ohio.
Cuntooyiinka aadka loo dubay (loo shiilay)
Dhowr cilmi baaris waxaa lagu ogaaday in cunidda cuntooyiinka aadka loo dubay, sida jibsiga, digaagta iyo cuntooyiinka la qalajiyay, ay sare u qaadaan halista wadne-xanuunka.
In aad loo dubo cuntada waxaa ka dhasho nooc dufan ah oo lala xiriirinayo nooca halista ah ee cholesterol-ka, waxayna hoos u dhigeysaa dufanka caafimaadka leh.
Muddo sanado ah, dufanka waxaa si wayn loola xiriirinayay sababta xanuunka wadnaha. Balse warbixin la daabacay sannadkii la soo dhaafay oo lagu baahiyay Majaladda dawada ee JAMA, waxaa lagu muujiyay in sokorta ay bedeleyso wixii horey loo aaminsanaa.
Hadda waxay khubarada sheegayaan in sokorta badan ay tahay halista ugu way nee sababta dhibaatooyiin ka dhasha wadna xanuunka sida, cayilka, caabuqyada, cholesterol-ka sarreeya, iyo sokorowga iyo waxyaabo badan oo sababa wadne xanuunka.
Cabitaannada warshadeysa iyo kuwa sokorta laga badiyay
Dad badan oo caalamka ku kala nool, sokorta ugu badan waxay jirkooda ka soo gashaa dhanka cabitaannada – ma ahan cuntada. Sida lagu sheegay baaritaan dhowaan la sameeyay, boqolkiiba 60% carruurta iyo boqolkiiba 54% ragga waaweyn iyo boqolkiiba 45 dumarka waaweyn, in ugu yaraan hal soda ah ay cabaan maalintii.
Buskutka iyo macmacaanka
Inta badan cuntooyiinka lagu kariyay foornada – gaar ahaan kuwa ganacsi ahaanta loo soo saaro – waxaa laga badiyo sokorta, waxayna u badan tahay in saliidda laga badiyay.
Waxa ku jiri kara waxyaabo dhibaato wayn oo dhanka nafaqada kugu noqon kara, sida ay khubarada aaminsan yihiin.
Subagga laga dhaliyo dhirta
Waxaa suuragal ah in weli ay furantahay fursad baaritaan dheeraad ah loogu sameeyay dufankan noocan ah, balse waxaa la ogyahay in cuntooyiinka ay ku badan yihiin dufankan lala xiriirinayo xanuuno ku dhaca wadnaha.
Previous articleSida aad uga hortagi karto inuu kugu dhaco cudurka Sokorowga
Next article9 astaamood oo muujinaya in maskaxda aad ka xanuunsan tahay